Showing ६१-७० of १४८ items.
सीजी फुड्स र गाउँपालिकाबीचको द्वन्द्व घटाऊ
नेपालको नाम चलेको कम्पनी सिजी फुड्स प्रालिले सुनसरीको गढी गाउँपालिका–२ औरावनीमा सिजी फुड्सका उत्पादन शुरु गरेको छ । सरकारको औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनालाई यसले सहयोग गरेको छ । ठूला उद्योगहरू पश्चिम केन्द्रित रहेका बेला सिजीले सुनसरीको एउटा गाउँमा ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्नु प्रदेश १ कै लागि गौरवको कुरा हो । करिब ७ करोडको लगानीमा शुरु गरिएको उद्योगले प्रदेशको शान बढाउनेमा दुई मत छैन । तर शुरुवाती समयमै उद्योग व्यवस्थापन र गढी गाउँपालिकाबीच मनमुटाव भएको समाचार बाहिरिएको छ । गाउँपालिका प्रशासन पक्ष र उद्योग प्रशासन पक्षबीचको द्वन्द्वले दुवैलाई किमार्थ फाइदा गर्दैन । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७
चाडबाडको हाउगुजी र स्थानीय सरकारको दायित्व
नेपालीहरूले विशेष गरेर दशंै र तिहार लामो सयमसम्म मनाउने गरेका छन् । नेपालीहरूको ठूलो चाडको रूपमा दशैंलाई लिइँदै आएको छ । यति बेला दशैं बहसमा रहे पनि जनजनले दशैंको जोहो ३÷४ महिना आघि नै गर्ने परम्परा छ । वास्तावमा दशंै रोजगारी जागिरका लागि घर बाहिर रहेका घर परिवार भेला भएर दुखसुख साटासाट गर्ने, छरछिमेक पुनर्मिलन गर्ने एउटा अवसरको रूपमा लिने गरिन्छ । दशंको अवसर पारेर घर परिवारलाई नयाँ लुगा किन्ने, घरमा चाहिने सामाग्री किन्ने, मिठो मसिनो जुटाएर खाने यही चाडमा मौका छोपिन्छ । यही दशंैको अवसर पारेर लुटपाट, छलछाम, कालोबजारी, चोरी तस्करी पनि उत्तिकै हुने गरेका छन् । यस्ता विकृतिजन्य काम रोक्नका
प्रकाशित मितिः आश्विन १०, २०७६
सरकार रङ्गेलीमा चिकित्सक पठाइदेऊ
सरकारी अस्पताल कति बेहाल छन् भन्ने सानो उदाहरण मोरङको रङ्गेली अस्पताललाई हेरे पुग्छ । जहाँ मोरङको पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी र सीमावर्ती भारतसम्मका आर्थिक अवस्था नाजुक भएका बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिंंदै आएका छन् । दुर्भाग्य, सरकारी बेवास्ताको सिकार र व्यवस्थापनको लापर्वाहीले सर्वसाधारणले सहज उपचार पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ । जिल्ला अस्पतालबाट प्राथमिक अस्पतालमा घटुवा भएको उक्त अस्पतालमा पहिले २० शैया रहेका थिए । जिल्ला अस्पताल हुँदा ४६ जनाको दरबन्दी रहेको यो अस्पतालमा घटुवा भएपछि २८ जनाको मात्र दरबन्दी रहेको छ । तर, कर्मचारी समायोजनपछि चिकित्सकहरू रङ्गेली अस्पतालमा कोही पनि हाजिर भएनन् । रङ्गे
प्रकाशित मितिः आश्विन ९, २०७६
विकासका काममा लापरबाही
देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले नेपालमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । संविधानमा सङ्घीयताले विकेन्द्रीकरणलाई सार्थक बनाउँछ अनि केन्द्रमा मात्र होइन गाउँ गाउँसम्म विकासको मूल फुट्छ अनि देश समृद्ध हुन्छ, जनता सुखी हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । सरकारले गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पु¥याउने भनेर खुब प्रचार पनि गरेको थियो । तर, यो परिकल्पनाले अहिलेसम्म सार्थक रूप लिन सकेको छैन । धेरैजसो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले समाज र देशको विकासभन्दा व्यक्तिगत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । गाउँ गाउँमा विकासको मूल फुटाउने परिकल्पना त राम्रो हो तर व्यवहारमा गाउँ गाउँको विकास जनप
टुरिजम मार्टको औचित्य
धरानमा शनिबारदेखि ३ दिने इष्ट टुरिजम मार्ट सञ्चालन भयाे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मार्ट एउटा कुनै पनि मुलुकको आफ्ना उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा लिने गरिन्छ । धरानमा अघिल्लो वर्षदेखि शुरु भएको टुरिजम मार्ट काठमाडौं बाहिर भएको सम्भव त यही इष्ट टुरिजम मार्ट हुनुपर्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा भएको मार्टलाई प्रदेश १ का पर्यटन व्यवसायीले कसरी उपभोग गर्छन् भन्ने चासोको विषय हो । मार्टमा विहार, सिक्किम, कलकत्ता, आसामलगायत प्रान्त तथा तेस्रो मुलुक भुटान र बङ्गलादेशबाट त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूको उपस्थिति प्रदेश १ का लागि अवसरको विषय हो । मार्टमा प्रदेश १ क
सुरक्षा योजना चाडलक्षित मात्रै नबनाऊ
हिन्दू धर्मावलम्बीको मुख्य चाड दशैंतिहार नजिकिँदो छ । १० दिनसम्म मनाइने दशैं सम्झिएर विदेशिएका नेपालीहरू पनि फर्किएर थातथलोमा आइपुग्छन् । तेस्रो देशमात्रै हैन, छिमेकी देशबाट फर्किनेहरूको पनि उस्तै गरी ताँती लाग्छ । यही बेला सबैको ध्याउन्न कसरी दशैं टार्ने भन्ने हुन्छ । दशैं टार्ने नाममा अपराध कर्ममा सक्रिय हुनेहरूको पनि कमी हुँदैन हाम्रो समाजमा । यो बेला दुले चोरको पनि बिगबिगी हुने बेला हो । चोरी, डकैती, लुटपाट दिनहुँ हुने हाम्रो समाजमा दशैंको बेला झनै बढ्छ । यस्तै कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयले चाडलक्षित सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ । दशैं आउन १२ दिन मात्रै बाँकी छ । यही स
संविधानको मर्म नभुल
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुग्दैछ । २०७२ साल असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ जारी गर्दै नयाँ युगको शुरुवात भएको बताएका थिए । एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व, १९ दिने जनआन्दोलनपछि २०६२/०६३ मा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शुरुवात भएको थियो । त्यही आधारमा बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ का आधारमा २०६५ जेठ १५ गते शदियौंदेखिको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरी गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । संविधानसभाले लामो समय लगाएर विभिन्न बाधा अड्चन पन्छाउँदै नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरेको थियो । यो अर्थमा यसलाई नयाँ युगको शुरुवात भन्नु सान्दर्भिक पनि थियो । नयाँ सं
पढ्नलाई भूमध्य रेखा पार गर्नुपर्ने बाध्यता
घरदेखि विद्यालय आउँदा पाँच घण्टा र विद्यालयबाट घर पुग्दा पनि त्यति नै समय पैदल यात्रा गरेर शिक्षाको भोक मेट्न चाहने किशोर किशोरीहरूको पीडा चानचुने होइन । मुलुककै राजनितिको विकास र विस्तारदेखि औद्योगिक विकासमा अगुवा मानिएको मोरङ जिल्लाभित्र पर्ने मिक्लाजुङ गउ“पालिका– १ कोलबोटे, आहाले, रमिते–टा“डी, गुर्दुमलगायत गा“उका किशोरी किशोरीहरु दैनिक १० घण्टा पैदल यात्रा गरेर शिक्षाको भोक मेटिरहेका छन् । हिसावै गर्ने हो भने एउटा विद्यार्थीले कक्षा दशसम्म अध्ययन गर्दा घरदेखि विद्यालयसम्म पैदल यात्रा गरेको दूरी मात्र पनि करिब ३६ हजार ५ सय किलोमिटर हुन्छ । यो दूरी भनेको पृथ्वीको
प्रकाशित मितिः आश्विन १, २०७६
मन्त्रीको ठाँट सुधार गर्ने कि ?
जुनै तन्त्र आए पनि ‘राजसी’ शैलीको अन्त्य सायदै होला, आइतबार नेपालगञ्जको घटनाले पुष्टि गर्ने आधार तयार गरिदियो । जनताबाट निर्वाचित भएर मन्त्री बनेका योगेश भट्टराई जसबाट आशलाग्दो अपेक्षा गरिएको थियो । उनैबाट एक घण्टा प्लेन ढिलाइ हुनुले ‘राजसी’ शैली प्रष्टियो । यही शैलीको विरोधमा जनताले प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ६ दशकपछि गणतन्त्र ल्याएका थिए । गणतन्त्र अर्थात् जनताद्वारा गरिने शासनप्रणाली । तर, व्यवहारमा भने जुनसुकै तन्त्र आए पनि उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नेता, मन्त्रीको हक उस्तै रहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो नेपालगञ्ज घटना । सर्वसाधारणलाई १–१ घण्
प्रकाशित मितिः भदौ ३०, २०७६
बम, बारुदको राजनीति अन्त्य होस्
देशमा अहिले दुईवटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) छन् । एउटा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको र अर्को नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको । दुवैको नाम एकै भएपनि एउटा दुई तिहाई मत पाएर सत्तामा छ भने अर्को त्यही सत्ताको विरुद्धमा भूमिगत शैलीमा गतिविधि गरिरहेको छ । सत्तामा रहेको नेकपाको चालिस प्रतिशत हिस्सामा विद्रोही नेकपाका पूर्व सहकर्मीहरूको समूह छ । एक दशकभन्दा बढी समयसँगै सशस्त्र युद्धमा लडेकाहरू अहिले आपसमा दुश्मन सरह छन् । एउटा कम्युनिष्ट सरकारका काम, कारबाही विरुद्ध अर्को तर उहि नामको कम्युनिष्ट पार्टी दशक लामो द्वन्द्वकालकै झल्को दिने गरी चन्दा
प्रकाशित मितिः भदौ २५, २०७६